एक स्टोरीब्रान्ड निर्माण गर्दै: Pro सम्भावनाहरू तपाईंको व्यवसायमा निर्भर गर्दछ Martech Zone
लगभग एक महिना अघि, म एक ग्राहकको लागि मार्केटि ide आदर्श बैठकमा भाग लिन पुगेँ। यो राम्रो थियो, उच्च टेक कम्पनीहरूको लागि रोडम्यापहरू विकास गर्नका लागि परिचित परामर्शसँग काम गर्दै। रोडम्याप विकसित भए पछि म टोलीले ल्याएको अनुपम र भिन्न मार्गहरू बाट प्रभावित भएँ। जे होस्, म टीमलाई लक्षित बजारमा केन्द्रित राख्न प्रतिबद्ध पनि थिएँ।
नवीनता आज धेरै उद्योगहरूमा एक महत्वपूर्ण रणनीति हो, तर यो ग्राहकको खर्चमा हुन सक्दैन। ईन्जेनियस समाधानका साथ अविश्वसनीय कम्पनीहरूले वर्षौंको अवधिमा असफल भएका छन किनकि उनीहरू धेरै चाँडै बजारमा आएका थिए, वा एक इच्छा प्रदान गरे जुन अहिले अवस्थित छैन। दुबै हिज्जे कयामत - माग सबै सफल उत्पादन वा सेवा को एक महत्वपूर्ण पक्ष हो।
जब मलाई यसको एक प्रति पठाइएको थियो स्टोरीब्रान्ड निर्माण गर्दै, डोनाल्ड मिलर द्वारा, म इमान्दारीसाथ यो पढ्न धेरै उत्साहित थिएन त्यसैले यो मेरो बुकसेल्फमा हालसालै बस्यो। मलाई लाग्यो कि यो अर्को धक्का हुनेछ कहानी र यसले कसरी तपाईंको कम्पनीलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ ... तर यो छैन। वास्तवमा, पुस्तक "यो तपाइँको कम्पनीको कथा भन्न को लागी किताब होईन" संग खुल्छ। Whew!
म पूरै किताब छोड्न चाहन्न, यो छिटो र जानकारीमूलक पढिएको हो जुन म सिफारिश गर्दछु। जे होस्, त्यहाँ एक महत्वपूर्ण सूची छ जुन म साझा गर्न चाहन्छु - एउटा छनौट गरेर इच्छा तपाईंको ब्रान्डको अस्तित्वको लागि सान्दर्भिक।
सात संभावना तपाईंको ब्रांडको अस्तित्व मा निर्भर गर्दछ इच्छा:
वित्तीय स्रोतहरूको संरक्षण - के तपाईं आफ्नो ग्राहकको पैसा बचाउन जाँदै हुनुहुन्छ?
संरक्षण समय - के तपाईंको उत्पादनहरू वा सेवाहरूले तपाईंको ग्राहकहरूलाई अझ महत्त्वपूर्ण चीजहरूमा काम गर्न बढी समय दिनेछ?
सामाजिक नेटवर्क निर्माण गर्दै - के तपाइँका उत्पादनहरू वा सेवाहरूले तपाइँको ग्राहकको जडानको चाहनालाई पोषण दिन्छ?
स्थिति प्राप्त गर्दै - के तपाईं एक उत्पादन वा सेवा बेच्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंको ग्राहकलाई शक्ति, प्रतिष्ठा, र शोधन प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ?
संचय संसाधनहरू - बृद्धि भएको उत्पादकता, राजस्व, वा घटाइएको फोहोरको प्रस्ताव व्यवसायलाई फस्टाउन अवसर प्रदान गर्दछ।
जन्मजात इच्छा उदार हुन - सबै मानिसहरु उदार हुन एक जन्मजात इच्छा छ।
अर्थको लागि चाहना - तपाइँका ग्राहकहरु लाई आफैं भन्दा ठूलो मा भाग लिन को लागी अवसर।
लेखक डोनाल्ड मिलर भन्छिन्:
हाम्रो ब्रान्डि forको लागि लक्ष्य हुनुपर्दछ कि प्रत्येक सम्भावित ग्राहकलाई हामी कहाँ जान चाहन्छौं ठ्याक्कै थाहा छ।
तपाईको ब्रान्डसँग कुन चाहनाहरू ट्याप गर्दै हुनुहुन्छ?
एक स्टोरीब्रान्ड निर्माणको बारेमा
स्टोरीब्रान्ड प्रक्रिया उनीहरूको ब्यापारको बारेमा कुरा गर्दा संघर्षरत नेताहरूले सामना गर्ने स to्घर्षको प्रमाणित समाधान हो। ग्राहकहरूसँग जडानको लागि यो क्रान्तिकारी विधिले पाठकहरूलाई अन्तिम प्रतिस्पर्धी फाइदा प्रदान गर्दछ, उनीहरूको ग्राहकहरूलाई उनीहरूको उत्पादनहरू, विचारहरू, वा सेवाहरू प्रयोग गर्न बाध्यकारी फाइदा बुझ्न मद्दतको रहस्य प्रकट गर्दछ।
स्टोरीब्रान्ड निर्माण गर्दै के यसले पाठकहरूलाई सात विश्वव्यापी कथा पोइन्टहरू सिकाएर सबै मानिसहरूले जवाफ दिने कुरा सिकाउँछन्; वास्तविक कारण ग्राहकहरु खरिद गर्छन्; एक ब्रान्ड सन्देश कसरी सरल बनाउने ताकि मानिसहरूले यसलाई बुझ्दछन्; र कसरी वेबसाइट, ब्रोशर, र सोशल मिडिया को लागी सबै भन्दा प्रभावकारी मेसेजि create बनाउने।
चाहे तपाईं एक अरबौं डलर कम्पनीको मार्केटिंग निर्देशक, एक सानो व्यवसायको मालिक, अफिसका लागि भागिरहेका राजनीतिज्ञ, वा रक ब्यान्डको मुख्य गायक, स्टोरीब्रान्ड निर्माण गर्दै तपाईं को हुनुहुन्छ भन्ने बारे कुरा गर्ने तरिका सँधै सँधै रूपान्तरण हुनेछ, तपाईं के गर्नुहुन्छ, र तपाईंको ग्राहकहरूमा ल्याउने अनुपम मूल्य।
प्रकटीकरण: म एक अमेजन सम्बद्ध हुँ र लिंक यस पोष्टमा पुस्तक खरीद गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
टैग: ब्रान्डब्रान्डिङएक स्टोरीब्रान्ड निर्माण गर्दैग्राहक कहानीइच्छाडोनाल्ड मिलरबिक्री सक्षमतास्टोरीब्रान्ड